Indawo onokuthi ube nguwe wokwenyani.
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguPanagiotis Christofakis
Indawo yethu yokuhlala eAgia Galini, ilali engekude kufuphi neRethymno, ekumazantsi eCrete.
Ifilosofi yethu yoyilo yimigca elula, iitoni zomhlaba ezimhlophe ezikhanyayo kunye nezixhobo zendalo ngentlonipho kunye nokusebenza ngokuthembekileyo kukulula kwethu. Uyilo oluncinci lwe-chic kunye nomoya we-bohemian uhambelana nentuthuzelo yakho kunye nokuphumla ngokupheleleyo.
Izixhobo zegumbi zijongene neemfuno zomhambi wanamhlanje, ofuna ukuba yedwa, oyinyaniso kwaye elula.
Ikhaya kude nekhaya ukufuna ngokwenene ukuzulazula kunye namava okwenyani. UChris & C lishishini losapho eliphethwe nguChristos & Christina owaqala ekuqaleni kweminyaka yoo-90s.
Ukusukela ngo-2019 ilungu elincinci losapho, uPanagiotis, wathatha ulawulo lwamagumbi ngenjongo yakhe yodwa yokuyila ingaphakathi kwaye azise eyakhe ifilosofi kunye nenkcubeko malunga nendlela amava okubamba ngayo.
Ecaleni kwendlu yethu, uya kufumana imarike encinci apho unokufumana khona izinto.
Kuthatha i-10 'ukuya elunxwemeni kunye ne-5' kumbindi welali ngeenyawo.
Indawo yelali ibonelela ngendlela elula yokujonga indawo esemazantsi eKrete. Ungafumana iilwandle ezikhethekileyo, abakhenkethi bentaba kwaye ungcamle ukutya kwasekhaya.
Siya kuba nemincili ngakumbi ukunceda kwaye sicebise iindawo esingaya kuzo.
Kwimeko apho ujonge indawo yokutyela enkulu onokuthi utye kuyo okanye ulwandle oluhle lokuqubha siyavuya kakhulu ukunika olu hlobo lolwazi.
Umbuki zindwendwe ngu- Panagiotis Christofakis
Imibuzo okanye idinga naziphi na iingcebiso, nceda ungalibazisi ukubuza.
UPanagiotis Christofakis yi-Superhost
Inombolo yomthetho: 00000701731
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Agia Galini